သူငယ်ချင်းအဆင့်ထက် ပိုနေကြောင်း သိနိုင်မယ့် အချက် (၁၀)ချက် - For her Myanmar
သူငယ်ချင်းအဆင့်ထက် ပိုနေကြောင်း သိနိုင်မယ့် အချက် (၁၀)ချက်
Relationship, Relationships>Friendship, Tips
ယောင်းတို့မှာ အခင်ရဆုံး ယောက်ျားလေးသူငယ်ချင်းရှိလား။ တစ်ခါတလေ သူက ကိုယ့်အပေါ် သာမန်မဟုတ်တဲ့ ဂရုစိုက်မှုလေးတွေပေးတယ်လို့ရော ခံစားဖူးလား။ အို….ဒါကလည်း အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းဆိုတော့ ဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့လို့ ပြောဦးမယ်မလား။
ယောင်းတို့ရေ …..ခင်မင်မှုနဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတဲ့ ကြားမှာ စည်းတစ်ခုကတော့ အမြဲရှိပါတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ ရုပ်ရည်ရူပကာ ဆွဲဆောင်မှုတွေပေါ် မူတည်လို့ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး အပေါင်းအသင်းဖြစ်သွားကြပေမဲ့ ခင်မင်မှု အတိုင်းအတာ တစ်ခုရောက်ပြီဆိုရင် ရုပ်ရည် လက္ခဏာ တွေကို သိပ်အရေးမထားတော့ပါဘူး။ အချစ်ဆိုတာကလည်း ရှုပ်ထွေးဆန်းကြယ်တယ်လေနော်။ ကိုယ့်ဘေးနားက ခင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ယောက်ျားလေးသူငယ်ချင်းက ယောင်းကို ချစ်နေပါပြီဆိုတဲ့ အရိပ်အမြွက်ပြလာတဲ့အခါ မသိလိုက် မရှိရလေအောင် ဒီအချက်လေးတွေ သိထားဖို့တော့ လိုမယ်နော်…
၁။ ယောင်းကို လက်ထပ်မယ့်အကြောင်း ဟာသလုပ်ပြောမယ်
တစ်နေ့နေ့မှာငါတို့လက်ထပ်ကြမယ်လို့ ပြောလာရင် ဒါကဟာသ မဟုတ်ပါဘူး ယောင်းရေ…..သူ့ရဲ့စိတ်ရင်းအစစ်အမှန်ကို ဟာသ နှောပြီး ပြောနေတာပါ။
၂။ ယောင်းနားမှာရှိနေတိုင်း သူဟာ စိတ်လှုပ်ရှားနေမယ်
သူငယ်ချင်းစိတ်ပဲရှိတဲ့သူက ဒီလိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာ အကြောင်း မရှိဘူးလေနော်။ သူက ယောင်းအနားမှာ ရှိရင် စိတ်လှုပ်ရှားပြီး ကိုးရို့ကားရားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ဒါက သူငယ်ချင်းအဆင့်ထက် ပိုနေတယ်ဆိုတာ ပြသတာပါပဲ။
Related article >>> အွန်လိုင်းပေါ်က အချစ်တွေအတွက် သိ၊ ကြား၊ မှတ်သား၊ သတိထားဖို့ရာ…
အကြည့်ချင်းဆုံ ရင်ခုန်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။ တခြားသူစိမ်းယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့ ဒီလိုစူးစိုက်ကြည့်တာက ကြက်သီး မွေးညှင်းထစရာ ကောင်းနိုင်ပေမဲ့ သူနဲ့ကျတော့ ဒီလိုစူးစိုက်ကြည့်တာက မထူးဆန်းတော့သလို ဖြစ်နေမယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ သူက ယောင်းကို သူငယ်ချင်းအဆင့်ထက်ပိုနေပါပြီ။
၄။ အထိအတွေ့တွေက နွေးထွေးနေမယ်
သူငယ်ချင်းတွေ ကြားထဲ တစ်ခုခုဆို ယောင်ယမ်းလက်ဆွဲတာတွေဘာတွေက ရှိတတ်ပေမဲ့ ဒီအပြုအမူတွေမှာ ချစ်စနိုးတွေ၊ နွေးထွေးတဲ့ ခံစားမှုလေးတွေ ပါနေပြီဆိုရင်တော့ ဒါဟာ မရိုးသားတော့ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေကြားထဲ ဒီလိုနွေးထွေးရင်ခုန်စေတဲ့ ခံစားချက်မျိုး ဘယ်မှာ ရှိလို့လဲနော်..
သူငယ်ချင်းတွေ ခရီးသွားတာလည်း မဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ခရီးသွားဖို့ ရင်ခုန်နေရင်၊ လိုတာထက် ပြင်ဆင်နေမယ်ဆိုရင်တော့… ခရီးထွက်တဲ့အခါမှာလည်း နှစ်ယောက်တူတူ ခရီးထွက်ရတာက သက်တောင့်သက်သာရှိသလို ယောင်းရဲ့ အမူအကျင့်လေးတွေက သူနဲ့အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ပြီး သာမန်ထက် ပိုပြီး ပျော်ရွှင်နေရပြီဆိုရင် ယောင်းတို့ကြားထဲမှာ ခင်မင်မှုတစ်ခုတည်းမကတော့ပါဘူး။
Related Article >>> မိန်းကလေးတွေ ကိုယ့်ချစ်သူကို ထားသွားရတဲ့ အကြောင်းအရင်း (၅) ချက်
၆။ ယောင်းပြောသမျှ နားထောင်ပေးမယ်
ယောင်းပြောသမျှကို စိတ်ဝင်တစား ဂရုတစိုက်နားထောင်မယ်။ ယောင်းရဲ့ ခံစားချက်ဘယ်လိုရှိတယ် ၊ တစ်နေ့တာမှာ ဘာတွေလုပ်တယ် အကုန်လုံးကို စပ်စပ်စုစုလိုက်မေးတယ်ဆိုတာ ယောင်းကိုချစ်နေလို့ပါ။
သူ့အကြောင်းကို ယောင်းဆီ အမြဲရင်ဖွင့်လာမယ်။ သူ့ရဲ့ အရှုပ်အရှင်းတွေ ၊ အားနည်းချက်တွေကို တစ်စက္ကန့်လေးတောင် တွေဝေမနေဘဲ ယောင်းဆီ ပြောပြတာမျိုးပါ။
ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ လူတွေကို တန်ဖိုးထားကြောင်း ပြချင်တဲ့အခါ သူတို့ကိုပေးတဲ့ ကတိတွေကို တည်လေ့ရှိကြတယ်။ သူကလည်း ယောင်းကို ပေးထားတဲ့ ကတိဆိုရင် အသေးအဖွဲလေးကအစ တည်တတ်တယ်ဆိုရင် သေချာပါတယ် ….ယောင်းကိုသူချစ်နေတာပါ။
ဒိတ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်မတပ်ဘဲ နှစ်ဦးသား အပြင်မှာ တွေ့ဆုံမှုလေးတွေလုပ်ဖို့သူကလာလာခေါ်မယ်။ နှစ်ယောက်လုံးကတော့ ဒါကို ဝန်ခံချင်မှာ မဟုတ်ပေမဲ့ ဒီိလိုဆိုရင်တော့ ယောင်းကို သူက သူငယ်ချင်း အဆင့်ထက်ပို ချစ်နေတာပါ။
၁၀။ ယောင်းဆီက အကြံဥာဏ်တောင်းမယ်
သူ့အတွက်ဆိုရင် ယောင်းက အကြံပေးဆရာမကြီး ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမယ်။ အခြားဘယ်သူ့ကိုမှ မယုံကြည်ရတဲ့ ပုံစံမျိုး လုပ်ပြီး အကြံဉာဏ်မှန်သမျှ ယောင်းဆီက လာတောင်းတယ်ဆိုရင် ယောင်းကိုချစ်နေတာပါ။
ယောင်းတို့ရေ…. အချစ်ဆိုတာ တစ်ခါတလေ အဝေးကိုပဲ မျှော်ကြည့်နေစရာ မလိုပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ အနီးတစ်ဝိုက်မှာလည်း အချစ်ရှိနေနိုင်တယ်လေနော်။ အချစ်ရဲ့ အနီးတစ်ဝိုက်မှာ အချစ်မိုးတွေ ရွာသွန်းပေးဖို့ဆိုတာ ဒီအချက်လေးတွေသိထားမှ မြင်နိုင်မှာပါ။
References : shortbrains , lovearts
ယောငျးတို့မှာ အခငျရဆုံး ယောကျြားလေးသူငယျခငျြးရှိလား။ တဈခါတလေ သူက ကိုယျ့အပျေါ သာမနျမဟုတျတဲ့ ဂရုစိုကျမှုလေးတှပေေးတယျလို့ရော ခံစားဖူးလား။ အို….ဒါကလညျး အခငျဆုံးသူငယျခငျြးဆိုတော့ ဒီလောကျတော့ရှိမှာပေါ့လို့ ပွောဦးမယျမလား။
ယောငျးတို့ရေ …..ခငျမငျမှုနဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာဆိုတဲ့ ကွားမှာ စညျးတဈခုကတော့ အမွဲရှိပါတယျ။ အစပိုငျးမှာတော့ ရုပျရညျရူပကာ ဆှဲဆောငျမှုတှပေျေါ မူတညျလို့ တဈဦးနဲ့ တဈဦး အပေါငျးအသငျးဖွဈသှားကွပမေဲ့ ခငျမငျမှု အတိုငျးအတာ တဈခုရောကျပွီဆိုရငျ ရုပျရညျ လက်ခဏာ တှကေို သိပျအရေးမထားတော့ပါဘူး။ အခဈြဆိုတာကလညျး ရှုပျထှေးဆနျးကွယျတယျလနေျော။ ကိုယျ့ဘေးနားက ခငျပါတယျဆိုတဲ့ ယောကျြားလေးသူငယျခငျြးက ယောငျးကို ခဈြနပေါပွီဆိုတဲ့ အရိပျအမွှကျပွလာတဲ့အခါ မသိလိုကျ မရှိရလအေောငျ ဒီအခကျြလေးတှေ သိထားဖို့တော့ လိုမယျနျော…
၁။ ယောငျးကို လကျထပျမယျ့အကွောငျး ဟာသလုပျပွောမယျ
တဈနနေ့မှေ့ာငါတို့လကျထပျကွမယျလို့ ပွောလာရငျ ဒါကဟာသ မဟုတျပါဘူး ယောငျးရေ…..သူ့ရဲ့စိတျရငျးအစဈအမှနျကို ဟာသ နှောပွီး ပွောနတောပါ။
၂။ ယောငျးနားမှာရှိနတေိုငျး သူဟာ စိတျလှုပျရှားနမေယျ
သူငယျခငျြးစိတျပဲရှိတဲ့သူက ဒီလိုစိတျလှုပျရှားစရာ အကွောငျး မရှိဘူးလနေျော။ သူက ယောငျးအနားမှာ ရှိရငျ စိတျလှုပျရှားပွီး ကိုးရို့ကားရားဖွဈနတေယျဆိုရငျ ဒါက သူငယျခငျြးအဆငျ့ထကျ ပိုနတေယျဆိုတာ ပွသတာပါပဲ။
Related article >>> အှနျလိုငျးပျေါက အခဈြတှအေတှကျ သိ၊ ကွား၊ မှတျသား၊ သတိထားဖို့ရာ…
အကွညျ့ခငျြးဆုံ ရငျခုနျတယျဆိုတာမြိုးပေါ့။ တခွားသူစိမျးယောကျြားလေးဆိုရငျတော့ ဒီလိုစူးစိုကျကွညျ့တာက ကွကျသီး မှေးညှငျးထစရာ ကောငျးနိုငျပမေဲ့ သူနဲ့ကတြော့ ဒီလိုစူးစိုကျကွညျ့တာက မထူးဆနျးတော့သလို ဖွဈနမေယျ။ ဒါဆိုရငျတော့ သူက ယောငျးကို သူငယျခငျြးအဆငျ့ထကျပိုနပေါပွီ။
၄။ အထိအတှတှေ့ကေ နှေးထှေးနမေယျ
သူငယျခငျြးတှေ ကွားထဲ တဈခုခုဆို ယောငျယမျးလကျဆှဲတာတှဘောတှကေ ရှိတတျပမေဲ့ ဒီအပွုအမူတှမှော ခဈြစနိုးတှေ၊ နှေးထှေးတဲ့ ခံစားမှုလေးတှေ ပါနပွေီဆိုရငျတော့ ဒါဟာ မရိုးသားတော့ပါဘူး။ သူငယျခငျြးတှကွေားထဲ ဒီလိုနှေးထှေးရငျခုနျစတေဲ့ ခံစားခကျြမြိုး ဘယျမှာ ရှိလို့လဲနျော..
သူငယျခငျြးတှေ ခရီးသှားတာလညျး မဆနျးပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ခရီးသှားဖို့ ရငျခုနျနရေငျ၊ လိုတာထကျ ပွငျဆငျနမေယျဆိုရငျတော့… ခရီးထှကျတဲ့အခါမှာလညျး နှဈယောကျတူတူ ခရီးထှကျရတာက သကျတောငျ့သကျသာရှိသလို ယောငျးရဲ့ အမူအကငျြ့လေးတှကေ သူနဲ့အံဝငျခှငျကဖြွဈပွီး သာမနျထကျ ပိုပွီး ပြျောရှငျနရေပွီဆိုရငျ ယောငျးတို့ကွားထဲမှာ ခငျမငျမှုတဈခုတညျးမကတော့ပါဘူး။
Related Article >>> မိနျးကလေးတှေ ကိုယျ့ခဈြသူကို ထားသှားရတဲ့ အကွောငျးအရငျး (၅) ခကျြ
၆။ ယောငျးပွောသမြှ နားထောငျပေးမယျ
ယောငျးပွောသမြှကို စိတျဝငျတစား ဂရုတစိုကျနားထောငျမယျ။ ယောငျးရဲ့ ခံစားခကျြဘယျလိုရှိတယျ ၊ တဈနတေ့ာမှာ ဘာတှလေုပျတယျ အကုနျလုံးကို စပျစပျစုစုလိုကျမေးတယျဆိုတာ ယောငျးကိုခဈြနလေို့ပါ။
သူ့အကွောငျးကို ယောငျးဆီ အမွဲရငျဖှငျ့လာမယျ။ သူ့ရဲ့ အရှုပျအရှငျးတှေ ၊ အားနညျးခကျြတှကေို တဈစက်ကနျ့လေးတောငျ တှဝေမေနဘေဲ ယောငျးဆီ ပွောပွတာမြိုးပါ။
ကိုယျခဈြရတဲ့ လူတှကေို တနျဖိုးထားကွောငျး ပွခငျြတဲ့အခါ သူတို့ကိုပေးတဲ့ ကတိတှကေို တညျလရှေိ့ကွတယျ။ သူကလညျး ယောငျးကို ပေးထားတဲ့ ကတိဆိုရငျ အသေးအဖှဲလေးကအစ တညျတတျတယျဆိုရငျ သခြောပါတယျ ….ယောငျးကိုသူခဈြနတောပါ။
ဒိတျလုပျတယျဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျမတပျဘဲ နှဈဦးသား အပွငျမှာ တှဆေုံ့မှုလေးတှလေုပျဖို့သူကလာလာချေါမယျ။ နှဈယောကျလုံးကတော့ ဒါကို ဝနျခံခငျြမှာ မဟုတျပမေဲ့ ဒီလိုဆိုရငျတော့ ယောငျးကို သူက သူငယျခငျြး အဆငျ့ထကျပို ခဈြနတောပါ။
၁၀။ ယောငျးဆီက အကွံဉာဏျတောငျးမယျ
သူ့အတှကျဆိုရငျ ယောငျးက အကွံပေးဆရာမကွီး ဖွဈခငျြဖွဈနမေယျ။ အခွားဘယျသူ့ကိုမှ မယုံကွညျရတဲ့ ပုံစံမြိုး လုပျပွီး အကွံဉာဏျမှနျသမြှ ယောငျးဆီက လာတောငျးတယျဆိုရငျ ယောငျးကိုခဈြနတောပါ။
ယောငျးတို့ရေ…. အခဈြဆိုတာ တဈခါတလေ အဝေးကိုပဲ မြှျောကွညျ့နစေရာ မလိုပါဘူး။ ကိုယျ့ရဲ့ အနီးတဈဝိုကျမှာလညျး အခဈြရှိနနေိုငျတယျလနေျော။ အခဈြရဲ့ အနီးတဈဝိုကျမှာ အခဈြမိုးတှေ ရှာသှနျးပေးဖို့ဆိုတာ ဒီအခကျြလေးတှသေိထားမှ မွငျနိုငျမှာပါ။
Tags: Friendship, love, Relationship, tips
Ei Mon June 11, 2018